हामी सानो युरोप बनाउन सक्छाैं
2017-05-31 | तीतोपाटी डट कम
तीतोपाटी - काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो महिला उपप्रमुख छानिएकी छन् काँग्रेस नेत्री हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ । उनले ५८ हजार नौ सय ५२ मत ल्याएर आफ्नो निकट्तम् प्रतिष्पर्धी राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठलाई २४ हजार ९८ मतान्तरले पराजित गरेकी हुन । भक्तपुरमा जन्मिएकी हरिप्रभाले बनस्पति विज्ञानका प्राध्यापक प्रकाश खड्गीसँगको विवाहपछि काठमाडौंलाई आफ्नो कर्मथलो बनाइन् । २०४६ सालको आन्दोलनदेखि नै राजनीतिमा होमिएकी उनले नेपाल महिला संघबाट आफ्नो औपचारिक राजनीतिक यात्रा शुरु गरिन् ।
त्यसपछि देशमा भएका परिवर्तनमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सँधै अग्रस्थानमा सहभागिता जनाउने उनी दुवै संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यको मनोनयनमा परेपनि सभासद् हुनबाट बञ्चित भएकी थिइन् । नेपाली काँग्रेसको ११औं महाधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधीका रुपमा रहेकी खड्गीले महानगरपालिकामा उपप्रमुखका रुपमा रहेर गर्ने कामकारबाहीका बारेमा पत्रकार रामकला खड्कासँग गरेको कुराकानी ।
टिकट पाएदेखि जितसम्मको अनुभूति कस्तो रह्यो ?
लामो समयदेखि मैले दिएको निरन्तरताको प्रतिफल हो यो । महिला संघमा रहँदा पनि करिव चार वर्ष त देशभरका ६५भन्दा बढी जिल्लाका गाउँगाउँमा पुगेर त्यहाँका महिलालाई राजनीतिक रुपमा सक्षम बनाउन प्रशिक्षण दिएँ । पार्टिबाट नै महिलालाई सुरक्षित नबनाई हुँदैन भनेर सबै पार्टि समक्ष ३३ प्रतिसत सहभागिताको माघ पनि राख्यौं । आज यो जितले आफूले गरेका कामको मुल्यांकन भएको महशुस भएको छ भने अबका दिनमा काठमाडौं र यहाँका बासिन्दाका लागि धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने जिम्मेवारीबोध गराएको छ ।
अहिलेको स्थानिय निर्वाचनमा महिलाको सहभागितलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यस निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता हेर्दा अबका दिनमा महिलाको अवस्था तल्लो तहदेखि नै सुध्रन्छ भन्ने मलाई विश्वास जागेको छ । अबका पाँच वर्ष पछि अर्को चुनाव गर्नैपर्छ । यसरी नै २० वर्ष कट्यो भने अहिले भएका नेतृत्वहरु पनि माथि उठ्दै जानेछन् । यसपालि नेपाली काँग्रेस होस् वा एमाले कसैले पनि महिलालाई वडा अध्यक्ष दिएनन् । त्यसैले आगामी दिनमा वडा सदस्य भएर काम गर्ने तरिका थाह पाइसकेकाहरुलाई वडा अध्यक्षसम्म बन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ ।
महानगरपालिकामा आएपछि पहिलो काम के गर्नुहुन्छ ?
हामीले पहिले आफ्नो स्वास्थ रहे नै सबै काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले धुलो धुवारहित काठमाडौं महानगरपालिका बनाउनु नै मेरो पहिलो काम हुनेछ । ठूल ठूला कुरा गर्नुभन्दा पनि हामीले सानैदेखि शुरु गर्नुपर्छ । धुलो हटेपछि काठमाडौंलाई हराभरा बनाउनुपर्छ । त्यसपछि महानगरपालिकाका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । किनभने नेपाली काँग्रेसले एउटी महिलालाई उपप्रमुखमा उठाउँदा तपाईंहरुले विश्वास गरेर मलाई जिताउनुभयो । नेकपा एमाले र राप्रपाले गठबन्धन गरेर महिलाको कोटा नै खाइदिए । त्यसैले महिला दिदीबहिनीलाई अब तलैदेखि राजनीतिमा आउनुपर्‍यो भनेर पनि आब्हान गर्न चाहन्छु । हामी महिलाले उद्यमी भएर दुई पैसा कतैबाट नकमाएसम्म अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यसैले मेरो अर्को प्राथमिकताको विषय भनेको महिलालाई उद्यमी बनाउनु पनि हो ।
काठमाडौंलाई हराभरा बनाउन ठोस योजना केही छ की ?
हामीले योजना मात्रै बनाएर हुँदैन । सबैभन्दा पहिले हामी नागरिक नै सचेत हुनुपर्‍यो । हामीमध्ये को चाहीं सफा महानगरमा बस्न नचाहाला र ? हामीलाई धुवा धुलो युत्त शहरमा बस्न निकै गाह्रो भइसकेकाले मुख्य तया अहिले रहेको पार्किङको समस्यालाई ब्यवस्थीत पार्नेतर्फ सोच्नेछौं । यहाँ रहेका प्रति जग्गालाई खोजेर पार्किङ ब्यवस्थित बनाइनेछ । आज जितेर भोलिनै कायाँ पल्टाउँछु भनेर म भन्दिन । समय लाग्छ । जनताको साथ लिएर उहाँहरुकै सल्लाह बमोजिम काम गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
प्रदुषणको मुख्य माध्यम बनेको सडकको धुलोलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने सोच छ ?
विकासका लागि सडक बढाउनै पर्छ भने तापनि सडक बढाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । महानगरपालिकामा बाटो बढाइसकिएकोले अब बढाउनुपर्ने म देख्दिन । अहिले मेलम्चीको पाइपले धुलो निकालेको छ । यो सबैतिर बिछ्याइएपछि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सडक पीच गर्नेमै हुनेछ । यहाँका बासीले अरु धेरै खोजेका पनि छैनन् । सुख शान्तिसँग बस्न पाउनुपर्‍यो , वाताबरण स्वस्च हुनुपर्‍यो । अनि पानी बत्ति, ढललगायतका सुविधा दिइयो भने यहाँ काम गर्न गाह्रो हुनेछैन भन्ने मैले महशुस गरेको छु । हामी आफ्नो पहिलो मिटिङमै यही विषयमा छलफल गर्नेछौं ।
हराभरा काठमाडौं र सास फेर्नयोग्य हावा बनाउन के गर्नुहुन्छ त ?
रुख त रोप्नै पर्‍यो नि । टाढा पुग्नै पर्दैन नि । म भारतको नयाँ दिल्लीसम्म पुग्दा पनि त्यहाँको हरियालीले धेरै प्रभावित भएको थिएँ । नेपाल बनाउन टाढाको उदाहरण लिनै पर्दैन , दिल्ली देखे पुग्छ । यो हाम्रो सानो देशलाई हराभरा बनाउन गाह्रो छैन । ५२ रोपनीको तीनकुनेलगायत अन्य प्रति जग्गामा पार्क बनाउने योजना छ ।
काठमाडौंका युवालाई यही शहरमा टिकाउन केही योजना छ की ?
पढाईका क्रममा विदेशीएका काठमाडौंका प्राय युवा जनशक्ति उतै पलायन भएको अवस्था छ । उनीहरुलाई यहाँ फर्काउन रोजगारीका विभिन्न अवसर सिर्जना गरिनेछ । उदाहरणका लागि खानाका पारखीहरु बढेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले निर्माण गर्ने पार्कमा पनि केही क्यान्टिन बनाएर युवालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यस्तै सूचना प्रविधी, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा पनि युवालाई विशेष सुविधा दिएर यही देशमा टिकाउने प्रयास गरिनेछ ।
काठमाडौंमा पानीको सकस कहिले टुंगेला ?
पानीको अभाव काठमाडौंको मात्रै नभई राष्ट्रिय स्तरकै समस्या हो । तर मेलम्ची आइसकेपछि काठमाडौंमा पानीको दुख हुँदैन भन्नेमा म ढुक्क छु । यदि भएनछ भनेपनि काठमाडौं भित्रका झरनाहरुलाई ब्यवस्थित बनाएर काठमाडौंमा बाढ्न सक्यो भने मेलम्ची आवश्यक पर्दैन भन्ने मलाई लागेको छ ।
महिलालाई कसरी आर्थिक रुपमा शशक्त बनाउन सकिएला त ?
हामी देशविदेशका बिस्कुट र चलकेट किनेर खान्छौं । त्यही चिजलाई हामीले यहीँ उत्पादन गरेर बजार ब्यवस्थापन गरिदियौं भने महिलाले रोजगारी पाउँछन् र आर्थिक रुपमा शशक्त पनि । अरु कुरा के गर्नु एउटा सिलाई मेसिन मात्रै चलाउन जान्यो भने पनि महिलाले दिनको हजार बाह्र सय कमाएर दश जनाको परिवारलाई पाल्न सक्छन् । उद्यमी बन्न चाहने महिलालाई सौलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाएर पनि उनीहरुको आर्थिक शशक्तिकरणमा जोड दिइनेछ ।मेयर नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ भने वडाका प्रतिनिधी अन्य विभिन्न पार्टिका , मिलेर काम गर्न गाह्रो नहोला ? पार्टि जुनसुकै भए पनि सबैको एउटै विन्दु विकास हो । त्यसैले काम गर्ने क्रममा कुनै पनि बाधा अड्चन आउला जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो महानगर विकासका लागि हामी सबै एक जुट भएर अगाडि बढ्नेछौं ।
काम गर्दै जाँदा पार्टिका कुरा मान्नुहुन्छ की देश र जनताको हितलाई हेर्नुहुन्छ ?
संसद र महानगरपालिकाको काम गर्ने शैली धेरै भिन्न छ । यहाँ प्रमुख ज्यूले आफ्नो अधिकारबमोजिम काम गर्नुहुन्छ भने मैले आफ्नै । २० बर्ष पहिलेजस्तो कुनै पनि काम गर्न प्रमुखको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन । अहिले प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यक्षेत्र नै छुट्याइएकोले काम गर्न कुनै अप्ठेरो नपर्ला । देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर नै पार्टिमा लागेको हुँ । त्यसैले देश र जनताका हितमा नुहने कुरामा कुनै पनि सम्झौता गर्दिन ।
जितेर आउने वडाका महिला प्रतिनिधीको क्षमता विकास गर्न के गर्नुहुन्छ ?
क्षमता अभिवृद्धिको तालिम त म आफैले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । कानुन र अधिकारको कुरा धेरैलाई थाह छैन । सबैजना राजनीति गरेर आएका पनि होइनन् । त्यसैले प्रशिक्षण दिएर मात्रै वडा वडामा पठाउनुपर्छ । नगरप्रमुख न्यायिक समितको प्रमुख पनि हुने ब्यवस्था छ , के अबका दिनमा काठमाडौंबासी महिलाले आफूलाई कत्तिको सुरक्षित महसुस गर्न पाउँछन् त ? मेरो तर्फबाट सतप्रतिसत सुरक्षा र अन्यायमा परेकालाई ध्यान दिलाउनेमा ढुक्क हुन अनुरोध गर्छु । तर अधिकार पायो भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग गर्नु भने हुँदैन । हामीले त्यसलाई दुईतर्फी ढंगले हेर्नुपर्छ । पुरुषलाई पनि महिलाबाट हिंसा भइरहेकोले त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । महिलाका नाममा छुट्याइने बजेट उनीहरुले उपभोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने गुनासो छ, अबका दिनमा के होला ? महिलाका नाममा छुट्टै योजनाअनुरुपकै बजेट राखिने हुनाले त्यसको संचालन पनि पारदर्शी ढंगमै हुन्छ भन्ने मलाइ विश्वास छ ।
शहरभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार निवारण गर्न के गर्नुहुन्छ ?
नगरको विकासको लागि काठमाडौंलाई भ्रष्टाचारमुक्त नबनाई हुँदैन । कसैले आफ्नो स्वार्थको लागि भ्रष्टाचार गराउँछ भने लिने र दिने दुवै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने मेरो बुझाई छ । शहर भित्रका यातायातलाई कसरी ब्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ? माइक्रो र अन्य साना गाडीलाई हटाएर ठूला बस संचालन गर्नेछौं । जहाँ पायो त्यही बस रोक्न नपाइने ब्यवस्थाले पनि सडकमा रहेका यातायातलाई ब्यवस्थित गराई यात्रुलाई सुविधा दिन सकिन्छ ।
शहरमा पाँच वर्ष भित्र रेल गुडाउने प्रशंगमा तपाईको विचार के छ ?
यो सम्भव कुरा हो । गरेरै छाड्ने हाम्रो प्रतिवद्धता पनि छ । काठमाडौंको मुनिमुनि रेल बनाउन सकिने भएर नै हाम्रो मेयर सापले कुरा गर्नुभएको हो रहेछ । त्यसमा हाम्रो पूर्ण साथ उहाँलाई रहनेछ । पाँच वर्ष भित्र काठमाडौं शहरलाई लैंगिक समतामुलक शहरको रुपमा देख्न पाइएला त ? अब संविधानले नै स्थानिय निकायमा महिलाको ४० प्रतिसत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको छ । अब हाम्रो लडाई ५० प्रतिसतका लागि हुनेछ । अझ यस भित्र पनि मेयर यति नै प्रतिसत भनेर छुट्याउन सके आगामी दिनमा महिला मेयरको संख्या पनि बढाउन सकिनेछ । कानुनले नतोकी हुनेवाला केही छैन । त्यसैले अवका पाँच वर्ष भित्र सक्षम वडाअध्यक्ष यति प्रतिसत भनेर कानुनी तबरमै छुट्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अबका पाँच वर्षमा हामीले काठमाडौंलाई संसारका कुनै पनि विकसित शहरसँग दाँज्न पाउनेछौं त ? नसक्ने भन्ने कुरै छैन । तर देश विदेशको कुरा धेरै गर्नुभन्दा पनि हामी आफूमा सचेत हुनुपर्‍यो र काठमाडौंलाई विकसित महानगरपालिका बनाउन काठमाडौंबासीले नै सहयोग गर्नुपर्‍यो । सबैको सहयोग पाए, यो काठमाडौंलाई केही नभए पनि एउटा सानो यूरोप बनाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ भन्ने विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ।